INDHAHA QUMBAHA: MIDABKA, SABABTA OO AH CAAJIS, BIYO, CASAAN IYO JAHWAREER - XOOLAHA
Waxaa jira fikrad ah in lo'da iyo dibi ay yihiin indho casaan. Ma aha. Waxay awoodaan inay kala saaraan midabada, inkastoo aan sida cad u ahayn aadanaha.
Indhahoodu waxay u habaysan yihiin si ay u arkaan dhammaan shayada hortooda. Ma arkaan waxyaabo fog oo faahfaahin ah.
Waa maxay sababta ay sidaas tahay iyo waxa cudurada indhaha ku dhacaan ee lo'da, waxaan u sheegi doonaa maqaalkeena.
Maxay indhaha ku hayaan lo'da?
Si aad u fahanto waxa indhaha ah ee lo'da, waxaad u baahan tahay inaad barato qaab-dhismeedkooda.
Ilaha lo'du wuxuu ka kooban yahay indeball oo leh muuqaalo muuqaal ah. Iyadoo loo marayo kormeeraha iyo macluumaadka dareenka indhaha ayaa lagu gudbiyaa maskaxda. Isbarbarka waxaa lagu dhejiyaa qulqulka uu sameeyay lafaha miskaha, wuxuuna leeyahay dabool, dibadda iyo gudaha gudaha.
Waxa kale oo uu leeyahay mid dhexdhexaad ah, dhexdhexaad ah iyo xididdada dhiigga.
Qaybta dibedda waa qolofta iyo sclera (qolofka borotiinka). Dambe wuxuu ka kooban yahay unugyo xajmi leh waana saldhigga indhaha. Cadaadiska murqaha ayaa haya xajiyaha, kaas oo sidoo kale hubiya hawlgalkeeda. Cunnadu waa mid hufan, iyada oo aan lahayn xididdada dhiigga, laakiin leh dareen-celin.
Waxay noqon doontaa mid waxtar leh si aad u barato naftaada anatomy ee lo'da iyo in la barto sifooyinka qaab-dhismeedka candho xoolo ah.
Sababtan awgeed, waxay aad u xasaasi u tahay saameynta dibedda. Iyada oo ay u iftiimiso iftiinka indhaha.
Iris, jidhka, iyo qolofka ayaa ah xuubka dhexe. Iris wuxuu leeyahay suuf oo go'aamiya midabka isha. Xarunteeda waxaa ka jira dalool (arday), kaas oo awood u leh inuu ciribtiro oo kordho, sidaas darteedna wuxuu nidaamiyaa socodka nalka.
Inta u dhexeysa indhaha iyo cunnida borotiinka waa kore. Iyadoo ay tahay awoodda jirka oo ka timaadda xididdada dhiigga. Cudurka daacuunka wuxuu ku yaalaa inta u dhaxeysa vascular iyo iris. Waa muruq ama shaqadiisu ay tahay in la hayo kobrik Cadaadiska waa laydhka gudaha. Dhabarkiisa, iftiinka iftiinka ayaa la qabtaa waxaana loo beddelaa dareemid dareemid. Luqadaha ku yaala lakabka lafdhabarta ayaa masuul ka ah aragti maalmeedka. Cones ayaa masuul ka ah midabka.
Muraayaddu waxay ku taallaa godadka indhaha. Waa muraayada biconvex ee curvda kala duwan. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad aragto walxaha dhow iyo kuwa fog.
Jidhka Vitreous, oo ka kooban biyo 98%, oo u dhaxeeya muraayada iyo raajada. Waxay mas'uul ka tahay qaabka qaabka aragtida, waxay qayb ka qaadataa hababka dheef-shiid kiimikaadka, wuxuu ilaaliyaa codkiisa oo wuxuu sameeyaa iftiin.
Indhuhu waxay ku yaalaan xagga hoose iyo indhaha hoostooda. Waxay jidhka ka ilaaliyaan waxyeellada farsamada. Qaybta gudaha ee gudaha waxaa lagu daboolaa xuubka xabka, geeska waxaa ku yaal xuub ah oo xoqan.
Cowsku wuxuu leeyahay aragti midabeed iyo mid dhexe oo muuqaal ah. Sababtoo ah mudnaanta ardayga ee jihada dushiisa, xayawaanku wuxuu leeyahay aragti muuqda oo ah 330 °.
Ma taqaanaa? Cows ayaa si fiican u horumariyay aragtida habeenkii. Muuqaal furfuran oo kor u qaadaya iftiinka muuqaalka sheyga ayaa mas'uul ka ah tani.
Laakiin sababtoo ah xaqiiqda ah in aagga dareenka muuqaalku uu ku yaalliin hortooda lo'da, waxay si cad u aragtaa wax walba oo hor taal iyada, laakiin si yar ayay u kala soocaan faahfaahinta waxyaabaha fog.
Asal ahaan waa indhaha qadar madow ama mugdi madow. Laakiin mararka qaarkood waxaa jira midabyo kale. Waxay ku xiran tahay xayawaanka xoolaha.
Cudurada indhaha ee lo'da
Cudurada unugta indhaha ee lo'da ayaa ah mid caadi ah. Waxay sababi karaan dhaawacyada farsamada, caabuqa, dhaawaca jireed ama kiimikada, ama ay ku dhacaan cudurada kale ee xayawaanka.
Sidoo kale ogow waxa jira cudurrada candho xoolo, cudurrada isgoysyada, cudurrada qafiska lo'da.
Waa maxay sababta caatada iyo biyaha
Jeexitaanku waa jawaab-celinta dabiiciga ah ee jirka ee kicinta. Iyadoo ay la socdaan ilmo, jidhka shisheeye ama jeermiska shimbiraha ayaa la dhaqaa. Sidaa darteed, haddii aad ku aragtid ilmada lo'da, waa inaad si deg deg ah u muujisid dhakhtarka xoolaha, maxaa yeelay taasi waxay noqon kartaa calaamad u ah cudurka sida keratitis (inflammation of cornea).
Waxyeelo farsamo (xoqan, toogasho);
Jirka (gubashada, shucaaca UV, boodhka lime);
xakamaynta madaxa (luminta dhalada);
midabka caanaha waa sigaar, qiiqa caddaan ah;
3% xal boric acid ah oo lagu dhaqo qoryaha isku dhafan;
cirbadaha antibiotics ama sulfonamides;
0,5% xalinta novocaine oo leh daawo antibiyootiko ah iyada oo loo marayo habka daahirsan.
Muuqaalka qofka soo qabsoomay wuxuu u dhici karaa gubasho ama waxyeelo gaarsiisan maskaxda. Nooca ciridka ayaa la sameeyaa, kaas oo isbeddelaya daahfurnaanta shaandhada, taasoo ka dhigaysa daruuro. Tartiib tartiib ah, indho indheyn ayaa u muuqda.
Waa muhiim! Dibiga ayaa ku dhalan kara indhoole. Tani waxay soo jeedinaysaa inta lagu jiro horumarka dhalmada ka hor inta uusan haysan hannaan barbar socda.
lumitaanka rabitaanka cuntada
xayawaanku badanaa wuu googooyaa madaxa.
Daaweyn (haddii uu helminths):
indhaha lagu dhaqay 3% xal boric acid ah oo leh siriinjo;
Biyo cad oo ku saleysan penicillin iyo sulfonamides ayaa lagu soo rogaa indhaha.
Nidaamyada waxaa la sameeyaa maalin kasta illaa dhammeystirida sumoojinta dulinka.
Daaweynta (haddii dhaawac):
3-4 jeer maalintii si aad u dhigtid sonkorta iyada oo aan lahayn buro hoosteeda hoosteeda hoosteeda;
3-4 ml of xal chlorophos ayaa lagu soo gaabiyaa indhaha ay saameysay;
laba jeer maalintii, saliid oo isha ku shub barta tetracycline.
Dhammaan daaweynta waa in la qoro lana socdaa dhakhtar xoolaad.
Waa maxay sababta casaanka ah?
Bararka xanuunka wuxuu keeni karaa guduudashada unugyada indhaha.
Dhaawac farsamo (jahwareer, jir shisheeye ah, taallo indhaha);
kiimikada (ammonia, alkali, acid, iodine, bata lime, Bacriminta kiimikada);
jirka (shucaaca UV);
bararka, casaan-darrada xiranka;
3% xalalka diirran ee boric acid ee dhaqitaanka;
dhibcood oo ah 0.25-2% zinc sulfate oo leh xal 1-2% ah ee novocaine;
Sababaha kuuskuuska indhaha ayaa noqon kara:
keratitis daahirsanaan leh.
Calaamadaha lagu garto xannuunka:
guduudka, xuubka nambarka;
cad-cad jaale ah.
Calaamadaha xanuunka keratitis:
nadiifinta saafiga ah;
duufaan, xoqin xoqan, midab huruud ah.
hagaajinta xaaladaha xabsiga;
3% xal of boric acid ama furatsilin 1: 5000 ee dhaqitaanka;
0.5% xalalka sulphate, sida loo yaqaan 'conjunctivitis';
cadar (furatsilinovaya, penicillin, iodoformnaya, xeroformnaya, hydrocortisone, mercury jaalaha) ee indhaha oo leh keratitis, cadaadis diiran;
iyadoo la raacayo geeddi-socodka tamarta adag, antibiyootikada iyo sulfonamides ayaa loo qoraa.
Ma taqaanaa? Bullfights on bullfight ma falcelin midabada maro, laakiin muraayada laftiisa, sida shay ah xanaaq, taas oo ay si joogto ah u soo hor jeedda indhaheeda.
Qalabka indhaha (korniinka indhaha)
Kacaawinta koritaanka ku yaala isha ayaa waxaa loo yaqaannaa pentygium. Isku dhejinta xuubka, xuubka saddex-geesoodka kaas oo ku soo dhawaaday geeska. Sababaha:
Cudurka dabaysha ee joogtada ah;
Cudurka infakshanka indhaha.
lumitaanka muuqaalka muuqaalka;
guduudasho gaduud ah;
muuqaalka kore ee dhibcaha.
Baro wax badan oo ku saabsan sida loo daaweeyo cataract.
Daaweynta. Horumarka waxaa lagu baabi'iyaa qalliinka.
Dhibaatadani waa dhacdo soo noqnoqota oo ku dhufan karta badh ka mid ah dadka oo dhan isla waqtigaas.
guga A hypovitaminosis;
hoos udhaca dareenka maskaxda;
adkeynta xakamaynta iyo xakamaynta;
Hordhaca cunto-karinta fitamiinada, saliidda kalluunka;
xakameynta emulsions bacteriostatic galay xannibaadda kiniinka laba jeer maalin kasta;
sunta synthomycin saliida leh ee lagu daro 2-3% nocoine, 1% atropin.
Waa muhiim! Ku dalbo daawooyinka la midka ah sida xannuun-maskaxeed.
Indhahaagu waa xubin muhiim ah xayawaan kasta. Dhibaatooyinka ay la yimaadaan si lama filaan ah, daaweyntuna mar kasta ma fududa. Sidaa daraadeed, way ka fiican tahay in lo'da ay nadiif noqoto, raaxo leh oo siiso cunto caadi ah marka loo eego cudurrada.